नेपालमा पनि देखियो नयाँ भाइरस, फेरि लकडाउनको सम्भावना कति? – Nayabook
नेपालमा पनि देखियो नयाँ भाइरस, फेरि लकडाउनको सम्भावना कति?
काठमाडौँ– नेपालमा सोमबार तीन जनामा नयाँ भाइरस पुष्टि भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ। पुसको पहिलो साता बेलायतबाट नेपाल आएकामध्ये तीन जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भएको हो।
नयाँ प्रजातिको उद्गमस्थल बेलायतबाट आएकामध्ये ६ जनालाई मन्त्रालयले निरानीमा राखेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा नमुनामध्ये ३ वटा नमूना पोजेटिभ र ३ वटा नमूना नेगेटिभ देखिएको हो।
नयाँ प्रकारको भाइरसको संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउनका लागि उनीहरुको नमूना विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा पुस २७ गते हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा २८ वर्षीया महिला, ६७ वर्षीय वृद्ध र ३२ वर्षीय पुरुष रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै बेलायत र फ्रान्सले लकडाउन गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण अमेरिकामा पनि तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि विश्वका विभिन्न देशहरुले उच्च साबधानी अपनाइरहेका छन्।
सोमबार नेपालमा नयाँ प्रजातिको संक्रमण पुष्टि भइरसकेपछि संक्रमण नफैलिएला भन्न सक्ने स्थिति नभएको विज्ञहरुले बताएका छन्। तर सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको प्रयोगलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। धेरैजसोले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन्। भिडभाग हुने ठाउँहरुमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको देखिँदैन।
रेन्टुरेन्ट, क्लब, फिल्म हल, सुपरमार्केटहरुमा पहिला जस्तौ भिडभाड हुने गरेको छ। यस्ता भिडभाड हुने ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षाका कुनै पनि मापदण्ड प्रयोग गरेको पाइँदैन। यसले गर्दा संक्रमणको खतरा अझ उच्च हुने विज्ञहरुले बताएका छन्।
स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्न बिर्सिदै गए पनि त्यसलाई निरन्तर रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले बताए। यद्यपि लकडाउनको सम्भावना अहिले नै भएकोबारे भने डा. कार्कीले त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताए।
उनले भने, ‘नयाँ प्रजातिको संक्रमणबाट बच्नका लागि पनि उही पुरानै कुराहरुलाई निरन्तरता दिने हो। अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउने, दूरी कामय गर्ने र साबुन पानीले हात मिचीमिची धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्छ। नयाँ प्रजाति भए पनि यसबाट बच्नका कुनै पनि नयाँ तरिका प्रयोग गर्नु पर्दैन। पुरानै कुरालाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्छ।’
डा. कार्कीका अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएपनि संक्रमणबाट बच्नका लागि पहिलो खोप भनेको मास्क नै हो।
‘कोरोना भाइरसको संक्रमण सकियो भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन। नयाँ खालको संक्रमण आएर धेरैलाई संक्रमण हुन सक्छ। संक्रमणबाट बच्नका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने पहिलो खोप मास्क नै हो। त्यसैले मास्क कुनै पनि बेला नछुटाऔँ, अझै सर्तकताका साथ प्रयोग गरौँ।’
अन्य देशहरुमा जस्तो नेपालमा धेरै जनामा नदेखिए कारण आतिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको उनले बताए।
‘धेरै मानिसलाई संक्रमण भयो। संक्रमणलाई रोक्न सकिएन मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेनन् भने यसको प्रभाव हेरेर अन्य कुरा सोच्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ’, उनले भने,‘नयाँ प्रजाति आउँदा पनि त्यसबाट जोगिने तरिका त्यही नै हो।’
डा. कार्कीका अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरस छिटो अरुलाई सरे पनि यसले गम्भीर भने गराउँदैन। ‘अहिलेको यो संक्रमणले बढी रोग गराउने होइन। धेरैलाई सार्ने हो। एकबाट अर्कोमा सर्न नदिनका लागि गर्ने भनेको त्यही मास्क लगाउनु नै हो’, उनले भने,‘नेपालमा नयाँ प्रजाति अएर धेरैलाई संक्रमण भने हुन सक्छ।’